Ungaguqula Kanjani Amanani Wokuzibandakanya Kwe-imeyili Okwehlayo | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 2, i-2016 NgoLwesibili, ngoFebhuwari 2, i-2016 Douglas Karr
Kuyamangaza kakhulu ezinkampanini eziningi lapho zithola ukuthi ababhalisile abangama-60% kuhlu lwe-imeyili olumaphakathi abekho. Enkampanini enababhalisile be-imeyili abangama-20,000, lawo ngama-imeyili ayi-12,000 asephumile.
Iningi labathengisi be-imeyili liyesatshiswa ngokulahla umuntu obhalisile oyedwa ohlwini lwabo. Umzamo owawudinga ukwenza laba ababhalisile ukuthi bakhethe ukungena wawubiza kakhulu futhi izinkampani zinethemba lokuthi ngelinye ilanga zizokubuyisa lokho kutshalwa kwezimali. Akunangqondo, noma kunjalo. Akukhona nje ukuthi ngeke babuyise lezo zindleko, ukuntuleka kokuzibandakanya nomsebenzi kungahle kube ukubeka i- ukubekwa kwebhokisi lokungenayo lonke uhlu lwabo lusengozini.
UMat Zajechowski weReachMail uhlanganise le ndatshana evelele kanye ne-infographic ehambisanayo, Ungaluhlanganisa Kanjani Uhlu Lwababhalisile Oluthukile, ngokuthi ungababandakanya kanjani kabusha ababhalisile. Nawa amasu abelane ngawo:
Yehlisa imvamisa ye-imeyili yakho ithumela.
Khomba okuqukethwe kwakho ezinhlwini ezincane, ezifanele, ezihlukanisiwe.
Chaza ababhalisile abangasebenzi usebenzisa izindlela zakho bese uyeka ukuthumela kubo.
Yakha umkhankaso wokuzibandakanya kabusha ukucela ababhalisile ukuthi bakhethe ukungena noma babuye.
Izithameli ze-Facebook Zokwenza ikuvumela ukuthi ulayishe futhi ukhombe ababhalisile bakho, indlela enhle yokufinyelela ababhalisile abangalele.
Qiniseka ukuthi uchofoza ku-infographic kaMat bese ufunda ezinye izeluleko zakhe ngalesi sihloko!
Tags: uhlu lwababhalisile olungasebenziobhalisile nge-imeyiliukuzibandakanya kwababhalisile be-imeyiliukubhalisa kabusha kwe-imeyilifacebook ngokwezifiso izilaleliukubandakanyeka kobhalisile
Izindleko Zokukala Ukulethwa Ngokuqhathaniswa Namanani Ebhokisi Lemilayezo Engenayo